नेकपाभित्र किन घरिघरि विवाद बल्झिरहन्छ?
आयोमेल संवाददाता काठमाडौं - मंगलबार, कात्तिक १८, २०७७
दुई वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले फुटको संघारमा पुगेको छ।
कर्णाली विवाद, मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनलगायतका विषयमा सुरू भएको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ।
पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्नुमा एकले अर्कालाई दोष दिइरहेका छन् भने कतिपय नेताले विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वयबीच संवाद हुनुपर्ने बताइ रहेका छन्।
दुईजना अध्यक्षले पछिल्लो विवादबारे अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा केही नबोलेपनि नेकपाका नेताहरू भने पार्टी फुट्ने सहितको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा दिएका छन्।
‘एकता गम्भिर संकटमा’
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी गम्भीर संकटमा फसेको बताएका छन्। पौडेलले फेसबुकमा ‘पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हामी सामु दुई वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारीका साथ उपस्थित थियो। तर, आजसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताको काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन्, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ। यति बेला पार्टी एकता गम्भीर संकटमा फसेको छ,’ लेखेका छन्।
विदेशी शक्त्तिबाट सचेत रहौं : नारायणकाजी
नेकपाका प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठले देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट सचेत रहन् आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चाहना पूरा गर्ने कार्य कसैबाट नहोस् भन्दै समयमै सोच्न उनले सचेत गराएका हुन्। साथै उनले व्यक्तिवाद र अहंकारले समाधानपनि नदिने तथा कसैको हित पनि नगर्ने बताएका छन्।
श्रेष्ठले भनेका छन्,‘व्यक्तिवाद, अहंकार, आवेग र आक्रोशले समाधान दिँदैन र कसैको हित गर्दैन। देश, जनता, श्रमजीवी वर्ग र पार्टी आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर सोचौँ र सकारात्मक निष्कर्ष निकालौँ।’
‘कुनै पनि हालता पार्टी फुट्दैन’
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्षमी शाक्य भने पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने विश्वस्त छिन्। यसअघि पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएर विभाजन हुनबाट जोगिएकोले अहिलेको विवादपनि त्यसरी नै साम्य हुने उनको बुझाइ छ।
यद्यपि पार्टी अहिलेको अवस्था आउनुमा शाक्य पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोषी देखेकी छिन्।
अध्यक्ष ओली विधि, सिद्धान्त र नीतिविपरित एकलकाँटे हिसाबले हिँड्दा पार्टी संकटको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको शाक्य बताउँछिन्। ‘शक्तिशाली बनाएर जनताले सत्तासम्म पु-यायो, जनताले कति धेरै विश्वास गरेर यहाँसम्म पठाए,’ शाक्य भन्छिन्,‘तर, अहिले सरकारले जनताको लागि के नै गर्न सकेको छ र? लापारबाही, अराजक र अलोकप्रिय ढंगले ओलीजी हिँडि रहनु भएछ। हामी सबैलाई दुःख लागेको छ।’
विश्वासका शक्तिशाली बनाएर सत्तासम्म पुर्‌याएको जनतामा निराशा आइसकेको उनले बताइन्।
उनले एउटा नेताले गर्दा जनतासामु शिर निहराउने अवस्था आइसकेको बताउँछिन्। ‘जनताको माया र विश्वास जित्नु सानो कुरा हो र? जनताले माया गरेर सत्तासम्म पुर्‌याएका हुन,’ शाक्य भन्छिन्,‘तर, यो पार्टीमा बसेर एउटा नेताले गर्दा शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १८, २०७७